Bayingcosana kithi ukwazi ukuthi abamnyama itiye inguqulo oludakisayo walesi siphuzo emangalisayo. AmaShayina, ama-ngokwesikhathi samanje ezweni labo ngezigaba, ngokuthi Puer yakhe. Kodwa isiphuzo ukuthi siye njalo zachazwa ngokuthi "black" Ezweni YeJapan libhekisela "red".
Black itiye etholwe kuphela uma leaf zalesi sihlahla ngo-70 noma ngo-80% is isibilile. Inqubo ukukhiqizwa kakhulu kangangokuba angabi naso isikhathi esiningi futhi ngokuvamile ngomshini. Ngokwesibonelo, iqoqo itiye eluhlaza, ukuthosa, futhi omiswe bese curling eshiya isikhathi hhayi kakhulu. Inqubo ende kunazo - lena ukuvutshelwa: amasonto ayishumi, kuye ngokuthi ikhwalithi ezihlukahlukene ishidi.
Ngo izinga black itiye ngempela ahlukahlukene: kusukela tselnolistovogo Lapsany eyatholakala kusukela amaqabunga etiye nge fluff engenhla, futhi tile noma granulated. Nge feedstock ezinhle zemvelo, kanye lokugcina lomkhiqizo etholwe ngokwanele.
Iningi ongaphakeme-ebangeni itiye izikhwama kubhekwe njengoba lisetshenziswe womshini yayo chips ne bran netiye uthuli. Ngakho-ke, Ongoti kanye abathandi isiphuzo ungalokothi ukuthenga izikhwama njengoba ukhululekile noma ukusetshenziswa kwazo.
itiye Black ukubunjwa yayo iqukethe eziningi theine noma caffeine ukhuluphalisa. Nokho, iqiniso ukuthi unakho lahlukene izakhi mkhondo ezahlukene ukuthi ngcono imithambo yegazi, ekusizeni ukwenza ngobusha Antioxidants kanye izinto ngcono wamathumbu umsebenzi, ngibopha ubuthi exempting kubo nomzimba womuntu, ungazi konke.
Leaf black itiye unesinye zinekhono elimangalisayo: ngcono izakhiwo thermoregulation yomzimba, nokusiza ukususa womjuluko ngokusebenzisa ikhule ezimbotsheni zesikhumba eziyingozi ezinobuthi.
Hot black itiye, ngaphandle ushukela, kwandisa kakhulu ukujuluka, ekusizeni ukumelana ngcono ukushisa. Ngakho-ke, sekuyisikhathi eside esiphuza iRussia ngemva bathhouse, ngakho ukuwasela e Central Asia elangeni elishisayo kakhulu.
Ngenxa yalesi isiphuzo isikhumba womuntu uhlanzekile kahle. Cosmetologists bazincome ikakhulukazi induna noma ukuthambekela induna.
Into yokuqala ukuthi efika engqondweni yakho lapho abandayo - itiye. Uma uphuza it kushisa ulamula noju, it kwandisa amasosha omzimba, uqala iwe lokushisa lomzimba okusezingeni eliphezulu.
It kuvela ukuthi ajwayelekile, futhi ajwayelekile kithi abamnyama itiye ezinjalo empeleni - hhayi isiphuzo evamile: yena ubuye beautician, udokotela kanye ngisho ejenti aqinisayo ayekulezo.
Emakethe namuhla kukhona okunhlobonhlobo isiphuzo. Nokho, abalandeli kweqiniso kanye Ongoti uthanda Oolong - itiye, "Black Dragon" privozimy kithi isifundazwe Chzhetszyan.
Uya ogwini East Sea, ezintabeni lapho usemanzi ulwandle ohelezayo bese fogs obukhulu ahlinzeke eliphezulu futhi ukunambitheka ibuthaka.
Zonke izinhlobonhlobo oolong itiye isiphuzo ngokoqobo ukuheha ubuqobelo be ukunambitheka kwalo isixha. Lapho ukwenziwa "Black Dragon" sonke isikhala emhlabeni iqala ukuba sigcwale iphunga engavamile uju noshukela, exovwe iphunga izimbali ezinhlobonhlobo. Kuyinto akukho ngozi libizwa ngokuthi "umbusi emhlabeni itiye."
Okwenza Coca Cola
Balance Sheet: An inothi ochazayo kuya-balance sheet. Isimo,
Inombolo Engine: idinga ke?
Natalia Gromushkina - actress eyaziwa Russian futhi umkhiqizi
Yikuphi lokuqala yavuka Museum esikisela ucansi